Iintengiso zeTronsmart zeSikhumbuzo se10th yeAliexpress | Iindaba zeGajethi
Itronsmart ijongana nesikhumbuzo seminyaka eli-10 yeAliexpress
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izithethi, elektroniki, ngokubanzi
Ngomso umhla obalulekileyo kwihlabathi lokuthenga nge-Intanethi. Aliexpress, eyona ndawo idumileyo yokuthenga kwi-Intanethi esuka e-china, ibhiyozela isikhumbuzo sayo seminyaka elishumi. Iminyaka elishumi epheleleyo yenkonzo, engenakuba yenye indlela, iya kubhiyozela ngezithembiso ezintle. UTronmart ujoyina lo mbhiyozo kwaye isizisa kwiimveliso ezintathu ngezaphulelo ongekhe ukwazi ukuziphosa.
Ukuba ubukhangela umzuzu wokufumana igajethi enxulumene nomculo Awunakuphuthelwa sesi sihlandlo. UTronmart ukwasimema ukuba sibhiyozele isikhumbuzo se-XNUMXth seAliexpress kunye negalelo lokwenza okuthile. Iminyaka elishumi yokuthengisa iimveliso zihamba indlela ende. Ukuba ufuna ukujoyina ipati jonga kwizindululo esikuzisa zona.
1 Ngaphezulu kwe-40% isaphulelo kwiimveliso zeTronsmart
1.1 Umrhwebi weOnyx Ace
1.2 Itronsmart T6 Plus
1.3 I-Tronsmart Spunky Beat
Ngaphezulu kwe-40% isaphulelo kwiimveliso zeTronsmart
Ukusuka kwiTronsmart basibonisa iindlela ezintathu ezahlukeneyo, Zonke ehambelana nesandi kunye nomculo, Ukuze sikwazi ukuthatha inxaxheba kwiAliexpress izivumelwano zokuzalwa zeshumi. Zimbalwa izihlandlo esinokufumana kuzo apho sinokuthenga iimveliso ezikumgangatho oqinisekisiweyo kula maxabiso amangalisayo. Ukuba ujonga ii-headphone ezingenazingcingo okanye isithethi seBluetooth, ungaphoswa lelo thuba.
Umrhwebi weOnyx Ace
Abanye I-TWS (i-True Wireless Sound) i-headphone kunye noyilo olunonophelo Banikezela ngetekhnoloji yakutshanje yokuthatha amava okumamela aye kwinqanaba elilandelayo. Enkosi Ku Chip yeQualcomm kunokwenzeka ukufumana ifayile ye- Umgangatho wesandi ongcono kunye nonxibelelwano olukhawulezayo noluzinzileyo. Babonisa umqhubi owandisiweyo we-13mm ngcono kunee-10mm AirPods.
Sifumana itekhnoloji evela Ukucinywa kwengxolo ngamava omculo amangalisayo ngaphandle kokuphazamiseka kwangaphandle okucocekileyo. Enkosi kwisifundo ukusebenza kakuhle kwamandla Ukuzimela kwayo, enkosi kwimeko yayo yokutshaja, iyakwelula Iiyure ezingama-24 zokudlala. Ukuzimela okuninzi kwezi headphone ukugcina nathi imini yonke.
Thembele kwi ulawulo lokuchukumisa ukuze sikwazi ukulawula ukudlala komculo ngaphandle kokuba ukhuphe i-smartphone yakho epokothweni. Ukongeza, singazisebenzisa ngokuzimeleyoZombini zokumamela umculo kunye nokuthetha kwifowuni kwifomathi ye "mono". Sibona njani enye indlela yokwenyani yee-AirPods ukuba enkosi kwisikhumbuzo seminyaka eli-10 se-Aliexpress esiza kuba nakho ukusifumana kuma-50% exabiso layo ngesiqhelo.
Myalelo we-Onyx Ace we-headphone ngesaphulelo kwi-Aliexpress apha
Itronsmart T6 Plus
Inketho yesibini yile isithethi esikhetheke kakhulul, iTronmart T6 Plus. Isithethi esidibanisa ezimbini zeempawu eziphambili esihlala sizijonga kwigajethi yolu hlobo; amandla kunye nobukhulu obuncinci. Ukudibanisa oku kunye uyilo oluthe nkqo ukuze umculo uvakale kuwo onke amacala umphumo uyonwabisa.
Iimpawu zeTronsmart T6 Plus ukuya kuthi ga kumandla angama-40W. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngaphezulu kwamandla aneleyo ukonwabela ngokupheleleyo umculo owuthandayo naphina endlwini. Kwaye kwiindawo ezivulekileyo kuya kuba nento eninzi yokuthetha. I-bass iziva inzulu ngokwenene. Sikwanayo ukulingana ukwenzela ukuba ukuveliswa kwakhona, ngokobuni, lelona liphezulu.
Enye yeenkcukacha abasebenzisi abazithanda kakhulu kukuba ikwabala nobuchwepheshe TWS. Lo nto singazidibanisa nezinye izithethi ezifanelekileyo esona sandi sihle sestereo. Ukongeza, ngeTronsmart T6 Plus nayo ungaqalisa kwaye usebenzise umncedisi welizwi kwisixhobo sakho. Isithethi esityebileyo onokuthi usithenge kwiAliexpress ngesaphulelo sama-43%.
Apha ungathenga isithethi se-T6 Plus kwi-Aliexpress ngesaphulelo esikhulu
I-Tronsmart Spunky Beat
Yaziswa ekupheleni kwe-2.019, kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sinethamsanqa lokuzama kwaye wenze uphononongo olunomdla kakhulu. Ngeengxelo ezilungileyo kakhulu ezivela kubasebenzisi abagqibe ekubeni bazithenge, i-Tronsmart's Spunky Beats ifumene igama elihle. Banazo chip yangoku yeQualcomm yentengiso ebonelela isantya soqhagamshelo esizinzileyo kunye nokusebenza.
El Ikhowudi yeQualcomm aptX esetyenziswe yiSpunky Beat, nikezela nge Isandi esisemgangathweni esifana nesi seCD. Into eyenza ukuba amava omsebenzisi anelise kakhulu. Amandla evolumu, umgangatho wesandi, Ukucinywa kwengxolo kunye nokuzimela okufanelekileyo zizizathu ezaneleyo zokuba banomdla kuwe. Kananjalo, enkosi kwisikhumbuzo se-10th seAliexpress onokuzibamba ngesaphulelo esingaqhelekanga se70%.
Apha ungathenga iSpunky Beat kwiAliexpress kunyuso
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Itronsmart ijongana nesikhumbuzo seminyaka eli-10 yeAliexpress
IHuawei P40 Pro -I-Unboxing kunye novavanyo lokuqala